घडीको सुई | नेपाली यौन उपन्यास - भाग १ - Naughty Nepali
Home » Nepali Sex Stories » घडीको सुई | नेपाली यौन उपन्यास – भाग १
यो कुरा सुरु भएको थियो २०७४ सालको नयाँ वर्षको दिन। बैशाख १ गते निन्द्राबाट ब्युझिए लगतै देब्रे हतको नाडीमा केही असहज महसुस भएको थियो। खस्रो चिज हातमा कोरिएको थियो, हेर्दा ट्याटुजस्तो देखिने छाम्दा भने कुनै कुरा टाँसिए जस्तो। बेलुका सुत्दा सामान्य नै रहको हातमा एकाबिहानै आएको अस्वभाविक परिवर्तनसंगै अनौठो अनुभुति भएपनि म डराएँ। छिटो छिटो खाटबाट उठेर बाथरुम पसेर हातमा साबुन लगाएँ। मज्जाले मिचे,पखाले। सो ट्याटु जस्तो चिज पखालिएन, बरु त्यसको रंग चेन्ज भयो। कालो गोलो घेरा देखियो। गोलो घेरा भित्र रेखाहरु आफसे आफ कोरिन थाले। हेर्दा हेर्दै गोलो आकारको दाँया बाँया घडीको दम जस्ता दुई आकार देखियो। अब घडी जस्तो आकृति प्रस्ट देखियो। घडीको १२ अंकको ठाउँमा एउटा सानो थोप्लो र ६ अंक रहने ठाउँमा अर्को थोप्लो देखे।
पानीभित्रबाट सहतमा निस्केसरी छालामा बिस्तारै तीनवटा फरक-फरक रंगका सुईहरु प्रस्ट देखिन थाले। रातो रंगको धर्सो १२ अंकतिरको थोप्लो तिर सोझियो। निलो र हरियो रंगको सुई ६ बजेको थोप्लो तिर तेस्रियो। सुईहरु देखिएको ठाउँ छाम्दा पनि महसुस हुन्थ्यो।
बाथरुमबाट निस्किए। सोच्दै नसोचेको क भयो, कसलाई भन्ने मन डरायो।
‘के भएको देखाउन हस्पिटल जाउँ कि? फेरी दुखेको पोलेको केही छैन। के होला पहिले पत्ता लगाउनु पर्ने सोचे। सोच्दा सोच्दै कोठा बाहिर निस्के। नजिकै रहेको सानिमाको घर तिर तेर्सिए। सानिमाको छोरा मैरै उमेरको थियो। उसैले भन्ने आँटेर कल गरे।
‘आयुष कता छस्?’
‘म आउँदै छु है’
‘ओके’, उसले फोन राख्यो।
हातको अनौठो घडी हेरे। घडीमा देखिएको दुईवटा दाँयाँबाँया रहेका दमजस्ता मध्ये एउटा अलिक बाहिर र अर्को केही भित्र छिरेको जस्तो थियो। बाहुला सारेर त्यसलाई छोपी बानेश्वर तिर लम्के।
बानेश्वर चोकमा बाटो काट्नेको भित्र सदा झै बाक्लो थियो। कलेज जान लागेका केटीहरु चर्को स्वरमा गफ गर्दै थिए। चोकको बिचमा ट्राफिकको सिठ्ठिको आवाज झनै चर्को थियो। धुवाँ, धुलो, कोलाहाल, यो भन्दा त गाउँकै वातावरण ठिक। गाउँसंग तुलना गर्दै मान्छेको भिड भित्र बाटो काट्न उभिरहेको थिए। बाहुला सारेर घडी हेरे। त्यो बाहिर निस्किएको जस्तो दम थिचेझै औलाले धकेलेको मात्र के थिए, त्यो त साच्चै थिचियो, भित्र पस्यो। यो भित्र पस्नासाथ पहिले दबिएझै रहेको अर्को तिरको दम फुत्त बाहिर आयो। १२ बजे तिर तेर्सिएको रातो सुइ ६ बजेमा झर्यो। निलो सुई १२ तिर तेर्सियो। हरियो सुईमा कुनै हलचल देखिएन। छालाको सहतमा आएको हलचलबाट आँखा उठाए, अर्को अनौठो घट्यो। वरिपरि रहको बाटो काट्नेको भिड गायब! वरिपरि हेरे, डाँडापाखा अनि वनजंगल मात्र। ती डाँडापाखा अरु कतै नभइ उही पुरानो गाउँको थियो, जुन केही बेर अघि सम्झदै थिए।
यताउता डुले, बानेश्वरबाट एकाएक गाउँमा कसरी आइपुगे, केही बुझ्न सकिन। हातको घडी हेरे। घडीको कालो गोलाकार आकार कालो थिएन। बरु चम्किलो सेतो गोलाकार भित्र रातो, निलो र हरियो सुई प्रस्ट थियो।
घर भएको ठाउँमा आइपुगे। अर्को अनौठो भयो। ठाउँ त त्यहि थियो तर त्यहाँ घरको कुनै नामनिशान थिएन। केही बेर बसेर केही परको बजार तिर लागे।
बजारको बिचमा पुगे। बिहान वरिपरिका गाउँबाट चिया पिउन आएकाहरुले पसलहरु थुप्रै मान्छे देखिन्थे। अधिकाँस चिनेकै अनुहार थिए। नजिकैक पसलमा पुगेर एक कप चिया ल्याउन भने। गाउँका बुढाहरु बसेको नजिकैको एउटा कुर्सी तानेर बसे। बुढाहरु चिया पिउँदै गफमा मस्त थिए। उनीहरु मध्ये केही मतर्फ हेर्थे। मलाई नौलो लाग्यो। उनीहरुको हेराइमा नौलोपन थियो, मानौ उनीहरुले मलाई चिनेका छैनन। चिया पिउन थालेपछि पल्लो गाउँका एक बुढाले सोधे, ‘बाबु कता पुग्ने हो?’
‘मलाई चिन्नु भएन र माइला बा?’
मेरो प्रतिप्रश्नले सबै चिया पिएकाहरु मतिर हेर्न थाले।
‘बाबुले त चिन्नु भएको रहेछ। खै, मैले त ठम्याउन सकिन।’, उनको बोलीमा खेलाचीको भाव थिएन। सबैले पहिलो पटक देखेको मान्छेलाई झै हेर्न थाले।
मेरो घर हुनुपर्ने ठाउँमा घर छैन। आफ्नै गाउँका मान्छेले मलाई चिन्दैनन्। मेरो अस्तित्व नै मेटिएको जस्तो भान भयो। बानेश्वरबाट यहाँ एकाएक आइपुग्नु अनि यसरी एकपछि अर्को रहस्यमय घटना हुनु। लाग्यो म यहाँ केवल आगन्तुक मात्र हुँ। मलाई सायद यहाँ अन्य कसैले पनि चिन्दैन। सायद मेरो घर परिवारको कुनै अस्तित्व छैन। कतै मेरो परिवार कसैको अस्तित्व नभएको अर्कै संसारमा त म आइपुगिन?
‘म यसै घुम्दै आएको बा। तपाइले सायद मलाई चिन्नुहुन्न।’, जवाफ सुनेपछि उनी आफ्नै गफमा मस्त भए। चिया टेबलमा राखेर मोबाइल निकाले। मोबाइलको घडीमा सवा सात बजेको थियो।
कुर्सीबाट उठेर पकेट छामे। सुक्को भेटिन। फरक्क फर्केर सरासर बाटो तताएँ। पसलका साहुले जोडले सोधे, ‘भाइ पैसा!’
पसलमा भएका सबैले मतिर हेरे। हातमा पोलेजस्तो भयो। बाहुला निकालेर हेरे। हरियो सुई हल्लिरहेको थियो। तातो बढ्दै गयो। हठाथ हरियो सुईमा छोए। त्यो एकाएक १२ बजेतिर हान्नियो, निलो सुईसंग ठोक्किएर पहिलेकै ठाउँमा फर्कियो। पसलका सबैजना फेरी गफिन थाले। बाहिरै निस्किएका साहु भित्र पसे। मैले बाटो तताएँ।
बजार सकिएपछि डाँडामा रहेको चौतारीमा पुगे। चौतारीमा मान्छेहरु थिए। भिड नभएको ठाउँमा बसे। सोच्ने समय चाहिएको थियो।
जे भइरहेको छ, घडीको कारण हुँदैछ। रातो, निलो र हरियो सुइको केही अर्थ छ। बानेश्वरको जेब्राक्रसिङमा देब्रे दम थिचेपछि घडीको बाहिरी घेरा कालोबाट सेतो भयो, अहिले काठमाडौंबाट म यति टाढा छु। अप्ठ्यारोमा पर्दा हरियो सुई हल्लियो त्यसलाई थिचेपछि समस्या समाधान भयो। बानेश्वरमा देब्रे दम थिचेपछि पहिले देखि थिचिएर रहेको दाहिने दम बाहिर निस्किएको सम्झिए। चौतारीमा मान्छेहरुको चहलपहल बढ्न थाल्यो अनि मैले त्यो दम थिचे।
रातो सुई १२ तिर फर्कियो। निलो सुई ६ बजेमा झर्यो। चौतारा वरिपरिको दृष्ट धमिलो हुन थाल्यो। वरिवरि मानिसको भिड देखिदै आयो। म बानेश्वरको जेब्रा क्रसिङमा बाटो काट्नेहरुक भिडमा आइपुगे।
केहीबेरपछि गाडीहरु रोखिए। मानिसहरु बाटो काट्न हतार गर्न थाले। पारि पुगेर मोबाइल हेरे। सात बजेर १८ मिनेट गएको थियो। केही बेर हिडेपछि सानिमाको घरमा पुगे। गेट नजिक पुगेपछि न्युरोडको रोड सोचेर दम थिचे। केही सेकेन्डमै न्युरोडको कोलाहल सडकमा पुगे। निकै बेर बसेपछि अर्को दम थिचेर पुन सानिमाको घरमा फर्किए। निकै पटक यसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुगि फर्किएपछि थाहा भयो, त्यो वैकल्पिक संसारमा जति समय बिताएर फर्किदाँ पनि वास्तविक संसारमा कत्तिपनि समय बित्ने रहेनछ। त्यहाँ जति समय बिताएपनि मेरो शरिरमा कुनै भौतिक परिवर्तन नहुँदो रहेछ। अनि यताबाट उता अन्य सामग्री लैजान मिल्ने रहेछ तर उताबाट वास्तविक संसारमा फर्किदाँ कुनै अन्य वस्तु ल्याउन नमिल्ने पत्ता लगाए।
यो अनौठो संसारमा केही दिन बिताएँसंगै घडीका तीन सुईको अर्थ बु्झ्न थाले। बानेश्वरबाट पहिलो पटक यो संसारमा आइपुग्दा यहाँ पनि बिहान नै थियो। तर समय संगै यहाँ दिन बित्न थाल्यो, रात, दिन हुँदै मिति परिवर्तन हुँदै गयो। महिना दिन पुगेपछि मैले रातो सुई थिचेको थिए। जसले म समयमा यात्रा गर्दै फेरी त्यही दिनमा आइपुगे जुन दिन बानेश्वरबाट यहाँ आएको थिए, त्यहि समय त्यहि दिन। रातो सुईलाई ठिक ढंगले चलाए, म समयमा पछाडी जाने सक्ने कुरा त्यही दिनबाट थाहा पाएको थिए।
मोबाइल हेरे, साढे ७ बजेको थियो। पोखराको फेवाताल सम्झी दम थिचे। फेवातालको किनारामा पुगे। दम थिचे, तालवाराही मन्दिर पुगे। केही बेरमा माछापुच्छ्रेको टुप्पामा पुगे। चिसोले थरथराएपछि इलाम पुगे। अनि दिनरात त्यहि दुनियाँमा कहिले कता कहिले कता। नेपालको कुनाकन्दरा पुगे। नेपालछोडी अन्य देशतिर हानिए। वर्षौ वर्ष डुलिरहे। नगएको ठाउँ बाँकी रहेन। नगरेको कुरा बाँकी थिइन। नजानेका कुरा सिके, नगरेको कुरा गरे। दशकौ दशक बिताउँदा पनि म उस्तै थिए। मोबाइलमा उहि मिति थियो अनि समय उही साँढे सात बजेको थियो। मोबाइल वास्तविक संसारको थियो, त्यसले वास्तविक समय देखाउँथ्यो। तर यहाँ दशकौ बितिसकेको थियो। अर्थात मेरो लागि समय रोकिएको थियो।
आफ्नै संसारमा फर्किने सोचेपछि अर्को दम थिचे। सानिमाको गेट नजिक आइपुगे। गेट खोली माथी पुगे। घरमा सबै थिए, सानिमा, सानोबा, आयुष अनि बहिनी आयुषा। वर्षौ देश विदेश घुमेर आएको थिए, जहाँ अनेकौ मानिससंग संगत गरेको थिए। केटी फकाए, घुमाए, नचाए, तर फर्कि आउँदा यहि बहिनीको यौनव रसिलो लाग्यो। १२ पढ्दै थिइ। बिछ्टै राम्रो। छोटा लुगामा बेफिक्री सोफामा अल्लारेपाराले तिघ्रा देखाएर बसेकी। उ तिर हेरे। मलाई हेरेर हाँसी। उसको कलिलो शरिरको स्वाद लिने तिव्र इच्छा जाग्यो। पहिले पनि नजागेको होइन तर यो पटक मसंग गज्जवको उपाय थियो। मसंग आफ्नै संसार थियो, आफ्नै ब्रह्माण्ड थियो। मैले घडीको दम थिचे।
nepali chikeko katha, nepali chikeko upanyas, nepali hot novel, nepali novel on sex, nepali sex katha, nepali sex novel, nepali sex story, nepali sex story from novel
Having fun in Valentine Day